नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले कहिल्यै हस्तक्षेप गर्दैन–चिनियाँ राजदूत [अन्तर्वार्ता]
जनकपुरधाम, १७ माघ– नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ दुई दिने भ्रमणका लागि बुधबार जनकपुर आएकी छिन् ।
नेपालको इतिहासमा भारतसँग सीमा जोडिएको जनकपुरको भ्रमणमा आउने होङ पहिलो नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हुन् ।
यूएनडीपीको परियोजना अन्तर्गत तराई मधेसमा आएको बाढीले गर्दा पीडित भएका परिवारहरुलाई बाढीपछिको राहत कार्यक्रमका लागि राजदूत होङ जनकपुर आएकी हुन् ।
तराई मधेसको सुन्सरी, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, पर्सा, धनुषा र रौतहत गरी ७ वटा जिल्लाहरुमा कुल ४० हजार बाढीपीडितहरुलाई राहत वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।
बुधबार बुद्ध ऐयरको उडानबाट जनकपुर आएकी राजदुत होङलाई यूएनडिपीको पदाधिकारीहरुले र जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ललित कुमार साह र उपाध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले जनकपुर विमान स्थलमा स्वागत गरेका थिए ।
विमानस्थलमै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होङसँग लोकान्तरका प्रतिनिधि अजय अनुरागीले छोटो कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको अंश :
तपाईको जनकपुर भ्रमणको मुख्य उद्देश्य के हो ?
जनकपुर नेपालको धेरै नै ठूलो र महत्वपुर्ण शहर हो । लामो समयदेखि नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर रहँदै आएको छ । यूएनडिपीले एउटा परियोजना लागू गरेको छ । पछिल्लो समय आएको वाढीका कारण पीडित भएका यहाँका जनतासँग हामी भेट्न गईरहेका छौं । बाढी आएको बेला पनि हामीले यूएनडिपी मार्फत केही राहतका सामग्रीहरु वितरण गरेका थियौं । हामी यूएनडिपी र यहाँको स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर खास गरी बाढी पीडितका लागि केही काम गर्न गईरहेका छौं । समय समयमा नेपालमा आउने गरेको प्राकृतिक प्रकोपका बेला हामीले नेपालका जनताका लागि काम गर्दै आएका छौं । आजको भ्रमणमा पनि स्थानीय सरकार र खास गरेर यहाँका मानिससँग नजिकबाट भेटेर नेपाली जनता र नेपालसँगको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन कोशिस गर्नेछौं ।
नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म जनकपुरमा कुनै पनि चिनियाँ राजदूतले भ्रमण गरेको छैन । तपाई नै पहिलो राजदूत हो जसले जनकपुरमा भ्रमण गर्न आउनु भएको छ । के यो धेरै ढिलो भएन ?
(हाँस्दै) कहिल्यै पनि ढिलो भन्ने कुरा हुँदैन । कहिले काँही ट्राफिक सहज हुँदैन । यद्यपि यसपटक हामी धेरै सप्ताहको प्रयास पछि अन्ततः जनकपुर आउन सफल भएका छौं । हामीले कहिल्यै पनि भन्नु हुन्न कि ढिलो भयो । हो, हामीले एउटा नयाँ शुरुवात गरेका छौं भनेर भने भन्न सकिन्छ ।
नेपाल र भारतबीच विशेष सम्बन्ध रहेको छ । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा रहेको क्षेत्र तर्फ तपाईको भ्रमणले केही विशेष अर्थ राख्दछ । हामीले यो भ्रमणबाट के अपेक्षा गर्न सक्छौं ?
गत बर्ष हामीले ८० वटा देशहरुले एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छौं । हामी सबैले परस्पर सहयोगका साथ एक आपसमा अघि बढेर जानु पर्दछ । हामीले जनता जनताका बीचमा सम्बन्ध बनाउनु नै महत्वपुर्ण कुरा हो । जसरी तपाईले भन्नु भयो त्यस्तो कुरा छैन । त्यो आवश्यक पनि छैन । हो, तर एउटा प्रयास भने गरेका छौं कि हाम्रो प्रयासले नेपाल भरीकै जनताको सम्बन्ध थप बलियो बनोस् ।
नेपालको संघीय संरचनालाई चीनले नरुचाएको हो भनेर भन्ने गरिन्छ । यस विषयमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
नेपालले कुन व्यवस्था रोज्ने हो, कुन व्यवस्थामा जाने हो त्यो नेपालको आफ्नै निर्णय रहन्छ । चीनले सधै नेपालले गरेको निर्णयलाई मान्दै आएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले कहिल्यै पनि हस्तक्षेप गर्दैन ।
हामी तपाईहरुको रोजाईलाई सधै सम्मान गर्छौं । हाम्रो सधै अपेक्षा के रहन्छ भने नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होस र आर्थिक विकास हुन सकोस् । हामी छिमेकीको नाताले नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई सधै सहयोग गर्न तयार रहँदै आएका छौं ।